Ilay mpanao zavakanto dia nampita mafana ny fotoana nostalgic ny fahazazana amin'ny andian-tsarimihetsika maromaro
Tao anatin'ny fahazazako dia tsara izany. Tamin'izaho mbola kely dia tsy niraharaha, nafana fo sy sambatra aho. Izany angamba no iray amin'ireo fotoana tsara indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Indraindray tena te-hiverina aho amin'izao fotoana izao, ary ny mpanakanto Omario Brunelleschi no manome antsika izany fahafahana izany. Izy no mampiseho ny fotoana mafana
Poster 25.08.2018 31.08.2018 interesnenkoe
Jelly cake "Aprikots in sour cream"
Amin'ny fahavaratra, raha tsy te-hiketrika ny fatana aho, dia manolotra ny mofomamy maitso maitso tsy misy mofomamy miaraka amin'ny rongony amam-borona. Mba hiorina tsara ny jelly
Poster 24.08.2018 31.08.2018 tsindrin-tsakafo
Tiako foana ny ronono mifoka mba hanampiana kafe, noho izany dia tonga ny fanandramana ny dessert italiana amin'ity ronono ity. Fahazavana, mafana
Ny ankamaroan'ny ankizy dia maneho fihetseham-po am-pitiavana amin'ny zava-mitranga manodidina azy ireo. Toy izy - ny ranomaso sy ny totohondry ary afaka mandeha any amin'ny Mazava ho azy fa ny reniko tsy nanome vatomamy - tsain'ny, nahare zavatra mampihomehy - mihomehy mafy, dia nahita namana - mihazakazaka sy be ...
Poster 08.08.2018 20.08.2018 fiofanana, interesnenkoe
Fitsipika momba ny fanabeazana 10, izay tokony harahan'ireo ray aman-dreny tsara
Tsy misy fitsipika iraisam-pirenena tokana ho an'ny fanabeazana ankizy. Raha ny marina, ny ankizy tsirairay dia olona iray, mila ny fomba fiasany sy ny fanalahidy izy ireo. Na dia tsy mitombo aza ianao, fa zanaka telo kosa indray mandeha, ny "fampianarana" iray amin'ny rehetra dia tsy ampy anao. Nefa ...
Jirama tsotra fotsiny raha toa ianao ka very tadidy amin'ny sofina
Samy tia firavaka daholo isika rehetra. Na dia misy aza ny loko, dia misy olana. Ny vehivavy tsirairay izay mihazona ny kavina, fara fahakeliny indray mandeha, saingy miatrika ity toe-javatra mahatsiravina ity: avy amin'ny peratra vavony mahafinaritra izay efa very ny fihazakazahana ... Saingy afaka mamonjy ny toe-javatra amin'ny alalan'ny tsotra
Poster 08.08.2018 20.08.2018 Fivoriam-piainana (Layfkakhi), interesnenkoe
Jelly nogatochki: endri-javatra vaovao amin'ny bilaogera tsara tarehy
Tsy dia nahagaga loatra an'izao tontolo izao nandritra ny fotoana lava ny mpitoraka bilaogy tsara tarehy sy ny hevitr'izy ireo? Noheverinay koa izany ary mbola mahita zava-baovao hafahafa eto amin'ny tontolon'ny manika. Tamin'ity indray mitoraka ity dia gaga tamin'ny tompon'ny manicure avy any Korea Atsimo ity tontolo ity, izay nanolotra ireo ankizivavy lava sy mangarahara, amin'ny endriny
Poster 07.08.2018 20.08.2018 interesnenkoe, Красота, lamaody
Page 20 avy 236«First«...10...1819202122...304050...»Last »